Home Wararka Muse Bixi oo si caro ku jirta uga jawaabay hadalkii RW Rooble...
Muse Bixi oo si caro ku jirta uga jawaabay hadalkii RW Rooble ka soo yeeray
Xukuumada Somaliland ayaa Raysal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ku eedeysay in uu ka been sheegay qadiyada dadka reer koonfurka ah lagaga tarxiilayo Laascaanood. Qoraal kasoo baxday Wasaarada Arrimaha Dibadda Somaliland, oo lagaga jawaabay hadalkii uu raysal wasaare Rooble 3 bishan ka yidhi qadiyada raafka Laascaanood, ayaa lagu sheegay in Somaliland ku qasbanaatay in ay faahfaahin bixiso.
“Kadib hadalkii ayaan darada ahaa ee uu Raysal Wasaaraha Soomaaliya dhawaan, kaga hadlay arrimo khuseeya masuuliyada madax-bannaanida Somaliland, dowlada Somaliland waxay dareentay in ay ku qasbantahay in ay wax kala caddayso”.
Wasaarada Arrimaha Dibbada, ayaa Rooble ku eedaysay in uu ka been abuuray qadiyada dadka reer koonfur ka ah lagaga tarxiilayo Laascaanood. “Raysal wasaaraha Soomaaliya wuxu doorbiday in uu ka bixiyo war aan sugnayn, iyo eedeeymo aan sal iyo raad lahayn, go’aankii sharciga iyo lagama maarmaanka ahaa ee dowladu ku tarxiilayso shakhsiyaad gaar ah oo si sharci daro ah ku daganaa degmada Laascaanood”.
“Somaliland waxay hoy nabdoon u ahayd qaxootiga kasoo qaxay waddamada jaarka mudadii 30 sanno ahayd ee lasoo dhaafay, sida ay farayso waajibaadka bini’aadamnimo ee ku xusan Xeerka Aadaminimada ee Caalamiga ah, Dastuurka Somaliland iyo xeerka muwaadinimada, dowlada Somaliland waxay ilaalisay nolosha iyo amaanka dadka ku nool gudaha xuduudaheeda”.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in masaafurinta dadka laga tarxiilayo ciida Somaliland, ay sababtay arrimo amaan, codsi kayimid bulshada iyo maamulka Laascaanood, hay’ada sirdoonka gobolka iyo xogo si toosa u sheegay in shakhsiyaad kani ay khatar galinayeen amaanka bulshada.
Waxa kale oo lagu sheegay in xukuumada Somaliland ay ilaalisay xuquuqda dadka laga masaafuriyay gobolka Sool. “Xukuumada Somaliland way ku qasabanayd in ay talaabadan qaado iyadoo ilaalinaysa xuquuqaha aadaminimo, sida biyaha, cuntada, hoyga iyo in aan la gaadhsiin waxyeelo iyaga iyo hantidooba”.